XUSUUS: Hadalkii Uu Zinedine Zidane Ka Sheegay Eden Hazard SAGAAL Sanadood Ka Hor, Xaalada Maanta Taagan Iyo Jawaabtii Hazard Ee Xilgaas!. - Gool24.Net
XUSUUS: Hadalkii Uu Zinedine Zidane Ka Sheegay Eden Hazard SAGAAL Sanadood Ka Hor, Xaalada Maanta Taagan Iyo Jawaabtii Hazard Ee Xilgaas!.
Kaydka qoraalka saxaafadu waxa uu marar badan muujiyaa isbar-bar dhiga laba xaaladood oo ay mid ahaan waqti hore soo dhacday oo lagu beego xalaada waqtigaas taagan, waxaana taas ka dhigan hadalkii Zinedine Zidane uu ka sheegay Eden Hazard muddo hadda laga joogo sagaal sanadood ka hor.
Waraysi iyo badan oo uu Eden Hazard bixiyay waxa uu ku sheegay in Zinedine Zidane uu yahay shaqsiga uu kubbada cagta isaga awogii u bilaabay isla markaana uu yahay halyayga uu kubbada cagta kaga daydo.
Waxa kale oo uu Eden Hazard hore u qarsan kari waayay sida uu ugu riyoodo in uu Zinedine Zidane kula shaqeeyo kooxda uu iyada lafteeda ku soo riyoon jiray ee Real Madrid.
Laakiin riyadu kuma koobna Eden Hazard oo kaliya balse waxaa la shaqaynta Eden Hazard ku riyoonayay Zinedine Zidane laftiisa oo waraysi uu sagaal sano ka hor bixiyay aanu halkan idiinku soo gudbin doono.
Zinedine Zidane ayaa sanadkii 2010 kii waxa uu sheegay in Eden Hazard uu yahay xidiga mustaqbalka isla markaana waxa uu waqtigaas ku dooday in Hazard uu la soo saxiixan lahaa iyada oo ay xataa indhihiisu isku xidhan yihiin.
Waqtiga uu Zinedine Zidane ka hadlayay Eden Hazard waxa uu xidiga reer Belgium joogay kooxdiisii hore ee Lille manuu ahayn xidiga uu maanta yahay, laakiin Zidane waxa uu si buuxda u arkayay waxa uu Hazard ku socday.
Zinedine Zidane oo sanadkii 2010 kii ka hadlayay Eden Hazard ayaa yidhi: ” Hazard waa xidiga mustaqbalka. Isagu aad ayuu u fiican yahay isla markaana xataa wuu ka sii fiicnaan doonaa”.
Lakaiin Zidane oo April 2010 kii wargayska Marca u waramayay ayaa ku dooday in xataa isaga oo indhaha isku haya uu Hazard keeni lahaa Madrid wuxuuna yidhi: “Anigu waxaan isaga Real Madrid keeni lahaa iyada oo ay indhahaygu isku xidhan yihiin!”.
Kadib Eden Hazard ayaa farxad kaga jawaabay amaanta iyo hadalka wayn ee uu ka helay waqtigaas ninkii uu kubbada cagta kaga dayanayay ee Zidane.
Eden Hazard oo markaas ka jawaabayay amaanta uu Zidane ka helay ayaa yidhi: “Zizou waad mahadsan tahay, waa farxad in qof isaga oo kale ahi uu si aad u fiican aniga iiga hadlay. Taasi naftayda ayay saamaynaysaa”.
Jawaabta Eden Hazard uu ka bixiyay amaanta layaabka lahayd ee uu April 2010 kii ka helay tababaraha uu hadda ka hoos shaqayn doono ayuu isna jawaabta aan soo sheegnay bixiyay isla April 2010 kii.
Maanta waxaynu markhaati ka nahay Eden Hazard iyo Zidane oo riyadoodii ku gaadhay 2019 isla markaana Bernabeu kuwada shaqayn doona laga bilaabo xili ciyaareedka cusub.